Farmaajo oo cambaareeyay madaxda maamul gobaleedyada qaybta ka ah olalaha M. Xasan Sheekh | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Farmaajo oo cambaareeyay madaxda maamul gobaleedyada qaybta ka ah olalaha M. Xasan...
Farmaajo oo cambaareeyay madaxda maamul gobaleedyada qaybta ka ah olalaha M. Xasan Sheekh
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta shir jaraa’id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho ku weeraray qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada oo uu ku eedeeyay inay kamid yihiin Ololaha Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku doonayo in dib loogu doorto.
Farmaajo ayaa sheegay in madaxda maamul goboleedyada qaarkood ee ololaha ka wada Muqdisho looga baahnaa in ay ka shaqeeyaan hagaajinta xaaladaha nololeed ee ka taagan gobolladooda halkii ay waqti iyo maal ku bixin lahaayeen waxa uu ku tilmaamay hogaamiye ku ‘fashilmay’ hoggaankii iyo masuuliyaddii dalka.
“waxaan fursadaan uga faa`iideysanayaa inaan ugu baaqo madaxda dowlad goboleedyada inay dhex-dhexaad ka noqdaan doorashada madaxtinimada ee nagu soo food leh, ayna xoogga saaran wax ka qabashada dhibaatooyinka maamul iyo nololeed ee ka jira deegaannada qaarkood. Waxaa nasiib daro ah inay qaar ka mid ah madaxda dowlad Gobolyeedadu isku dayayaan inay shacabka Soomaaliyeed ku qasbaan hogaamiye ku fashilmay hoggaankii iyo masuuliyaddii dalka oo aan ognahay meesha uu dalka dhigey afartii sano ee lasoo dhaafay.” Ayuu yiri Musharrax Farmaajo.
Dhanka kale, waxa uu shirkiisa jaraa’id baaq ugu diray xubnaha Barlamaanka Soomaaliya isaga oo ka codsaday in ay si hufan uga soo dhalalaan waajibadka saaran iyo dhaarta ay u mareen dalkooda iyo dadkooda.
“Waxaan ku kalsoonahay in xildhibaannadeena sharafta leh ay waajibaadka saaran u gudan doonaan si xambaarsan dareen qaranimo iyo mustaqbalka uu dalkeenu u jiheysan doono afarta sano ee nagu soo socota. Sidaa darteed waxaan ka codsanayaa xildhibaanada qaranka in ay si qoto dheer uga fiirsadaan cidda ay ku aaminayaan masiirka umadda Soomaaliyeed.”
Ugu dambeyntii, Mudane Farmaajo ayaa ugu baaqay musharrxiiinta u taagan xilka Madaxweynaha in ay kalsooni buuxda siiyaan xubnaha Barlamaanka, halkii ay taageero ka raadin lahaayeen dalal shisheeye.
“Waxaan u soo jeedinayaa musharrixiinta dhamaantood in ay ku kalsoonaadaan 329-ka xubnood ee wakiilka ka ah shacbiga Soomaaliyeed, ayna iimaansadaan dalkooda iyo dadkooda, kuna kalsoonaadaan halkii ay taageero ka raadin lahaayeen dalal shishiiye.”
Shirka Jaraa’id ee maanta ayaa ku soo beegmay waqti xasaasi ah oo ay kaabiga nagu soo haysto doorashada Madaxweynaha ee dhacaysa 8da Febraayo, 2017.
Waxaa sidoo kale laga dheehan karaa hadalka Farmaajo inuu aad uga careysanyahay Madaxweynaha Galmudug Mudane Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo Madaxweyne K/Xigeenka Hirshabelle Cali Guudlaawe oo xalay ku biiray ololaha Madaxweyne Xasan Sheekh.
Waxaa kale oo hadalkiisa laga dheehan karaa inuu farriin dadban u dirayo dalalka faragelinta ku hayo doorashada Soomaaliya iyo musharrixiinta lagu tuhmayo in ay taageero ka helayaan dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan kuwa dariska ah.
Previous articleWarbixin: Hunuu-Hunuu hadal ma ahan
Next articleMidowga Afrika oo si kuluul uga hadlay go’aanada Trump